E-Export - Atombohy amin'ny Propars izao ny E-Export!
Raiso ny anjaranao amin'ireo tsena lehibe indrindra any Eoropa mivarotra singa 48 tapitrisa isan'andro.
Propars Amazon dia mpamatsy serivisy ofisialy.
Tiorka tokana ary mpitondra an'izao tontolo izao E-EXPORT vahaolana
Kitiho, ampitahao, JEREO ny mahasamihafa azy.
E-Export miaraka amin'ny tranokala E-commerce
96% amin'ireo tranokala e-varotra nosokafana tany Torkia no nakatona tamin'ny taona voalohany.
Rehefa manomboka mandefa e-export miaraka amina fonosana e-commerce misy fiatraikany ambany ianao dia ho irery amin'ny dingana rehetra.
Ny varotra e-varotra isan-taona an'ny mpivarotra Propars dia mitombo 300%.
E-fanondranana miaraka amin'ny Propars
Ireo rehetra nanomboka ny e-export niaraka tamin'ny Propars dia amidy tamin'izao tontolo izao tamin'ny taona voalohany. 64% n'ireo nahazo serivisy ho an'ny consultants ho an'ny Propars maimaim-poana dia nanomboka nandefa e-export tao anatin'ny 3 volana voalohany.
Ny fivarotan'ireo mpampiasa izay mivarotra amina tsena 3 na mihoatra dia miakatra 156%.
Miaraka amin'ny rafitra fandikan-teny mandeha ho azy, ny fampahalalana momba ny vokatra soratanao amin'ny teny Tiorka dia adika ho azy amin'ny fitenin'ny firenena hanokafana ny tsena amidy.
Raha tianao dia azonao atao ny manampy ny dikanteninao manokana ho an'ny firenena tsirairay amin'ny vokatrao ao amin'ny Propars.
Azonao atao ny mijery sy misafidy ny sokajin'io firenena io amin'ny teny Tiorka any amin'izay firenena tianao hivarotana ny vokatrao eny an-tsena.
Azonao atao ny mahita ny "sivana vokatra" amin'ny teny Tiorka, izay mampisongadina ny vokatrao eny an-tsena, ary mampifanaraka azy ireo amin'ny sivana vokatrao manokana ary manokatra azy ireo hamidy. Ohatra: Maitso amin'ny sivana vokatra dia hiseho ho MAITSO amin'ny tsenan'ny UK.
Any Torkia, ny mpanjifa britanika anao dia mahita ny kiraro amidinao amin'ny haben'ny 40 ho 6,5 ary ny mpanjifa amerikana anao ho 9, noho izany dia hahazo fahafaham-po amin'ny mpanjifa ambony ianao amin'ny fivarotana ny vokatra mety.
Ny safidin'ireo orinasa 1500+ dia Propars.
"Azonao atao ny mampifandray ny tranokalanao e-varotra na ny programa momba ny kaonty erp amin'ny Propars ary manampy endri-javatra e-export. Zava-dehibe ny mitantana toy ny mivarotra"
Atombohy ny E-Export amin'ny dingana telo miaraka amin'ny Propars
Manokatra ny fivarotana ho anao maimaimpoana amin'ny sehatra tianao amidy i Propars.
Io dia ahafahanao mahazo vidiny fihenam-bidy manokana avy amin'ireo orinasam-pitaterana entana ary manao fandefasana mora.
Atombohy ny fivarotana
Ny vokatra apetrakao amin'ny Propars dia amidy any amin'ireo firenena tadiavinao.
Miaraka amin'ny Propars, manomboka mivarotra amin'ny tsindry iray amin'ny tsena manerantany toa an'i Amazon, Ebay, Allegro, Wish ary Etsy!
Angony ny baikonao rehetra amin'ny efijery tokana, faktiora amin'ny tsindry iray! Azonao atao ny mamoaka e-faktiora amin'ny ampahany amin'ny baikonao avy amin'ny tsena sy ny tranokalanao e-varotra ary manonta endrika entana betsaka.
Miantsena avy eny an-tsena fa tsy tranokala e-varotra manokana an'ny mpanjifa
Antony 10 lehibe antony
Mpanjifa tsenaMpanjifa E-Commerce
Safidy fandefasana maimaim-poana
Politikan'ny vidiny mirary
Fiantsenana azo ampiharina sy mora
Fiantsenana mijanona tokana
Toerana fampitahana ny vidiny
Sakany vokatra marobe
Ny fahatakarana mahazatra momba ny varotra izao dia nandao ny toerany tamin'ny e-varotra. Na izany aza, ny e-varotra dia tsy vitan'ny hoe mamela anao hahatratra ny tanàna rehetra ao amin'ny firenenao. Mandritra izany fotoana izany, ny firenena dia manolotra fahafahana hiampita kaontinanta. Miaraka amin'ny e-export, azonao atao ny manatitra ny vokatrao amin'ireo mpanjifa mety aminao na aiza na aiza manerana izao tontolo izao.
Ivom-pivarotana goavana sy virtoaly izao ny tsena eran-tany izay ihaonan'ny mpanjifa rehetra manerana izao tontolo izao. Ny fanokafana fivarotana amin'ireo sehatra ireo dia midika hoe manana orinasa hotsidihin'izao tontolo izao.
Na dia lasa malaza be aza ny e-export, indrindra amin'ny hetsika fifanakalozana vahiny tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny orinasa dia manana famandrihana sasany momba ity olana ity.
Voalohany indrindra, mihevitra ny SME eto amintsika, izay tsy ampy ny vaovao, fa tsy afaka miatrika ireny fifampiraharahana ireny. Ny orinasa lehibe kosa dia sahirana amin’ny fandraisana ny dingana tokony hatao.
Na izany aza, ny fanohanana rindrambaiko, ny fandrisihana avy amin'ny governemanta, ny serivisy fandoavam-bola, ny serivisy logistika dia tena mivoatra. Ankehitriny, na inona na inona haben'ny orinasa na vokatra iray, dia afaka manomboka haingana sy mora ny e-export.
Propars no mpiara-miombon'antoka amin'ny vahaolana amin'ny sehatra manerantany any Torkia. Miaraka amin'ny rindrambaiko mandroso sy ekipa matihanina, dia mitondra bebe kokoa ny orinasanay amin'ny e-export.
Miaraka amin'ny E-Export Mahazoa vola amin'ny tahan'ny vola
Ny Turkish lira dia nanaraka tabilao miovaova tato anatin'ny taona vitsivitsy ary indrisy fa niaina fitotonganana lehibe. Na izany aza, misy fomba iray hamadihana ity toe-javatra ity ho tombony.
Ny fivarotana ny vokatrao amin'ny fankasitrahana ny tahan'ny fifanakalozana dia ahafahan'ny vokatrao mahazo lanja amin'ny TL. Ny vokatra vokarinao amin'ny TL any Torkia dia amidy any ivelany amin'ny vola toy ny USD, euro ary sterling. Amin'izany fomba izany dia mampitombo ny tombom-barotrao amin'ny e-export ianao. Ankoatra izany; Iray amin'ireo tombony amin'ny fanondranana elektronika ihany izany.
Ny entanao ao anatin'ny sehatry ny fanondranana madinika dia tsy misy hetra any Torkia. Ambonin'izany; Raha nandoa VAT ianao tamin'ny fividianana an'ity vokatra ity dia ahafahanao mamerina io vola io.
Ny fizarana ny varotrao amin'ny fantsona maro miaraka amin'ny tahan'ny fifanakalozana dia manome modely azo antoka kokoa ho an'ny orinasanao. Ary miaro anao amin'ny fiovaovan'ny tsena anatiny.
Mivarotra manerana izao tontolo izao
Miaraka amin'ny fampiasàna miely patrana amin'ny Internet, dia lasa fanatontoloana izao tontolo izao ary, amin'ny lafiny iray, dia nihena. Tsy dia lavitra intsony ny elanelana. Ny orinasa iray any Torkia dia afaka mampiditra mora foana ny vokatra amin'ny mpanjifa mety any amin'ny kaontinanta hafa ary afaka manatitra izany haingana raha misy baiko voaray.
Tsy mila mieritreritra hoe firy ny olona azonao mivarotra vokatra vokarinao ao amin'ny tanànanao na firenenao. Ny fanontaniana manan-danja dia; firy ny olona eto amin'izao tontolo izao no azonao amidy.
Maninona raha miampita sisintany rehefa afaka manatratra an'izao tontolo izao ianao?
Mifandraisa aminay izao!